DHAGEYSO:Cirro oo mar kale loo doortay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Cirro oo mar kale loo doortay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban
DHAGEYSO:Cirro oo mar kale loo doortay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban
Maxamed Xasan Cirro ayaa loo doortay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ka dib doorasho maanta ka dhacday caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Maxamed Xasan Cirro ayaa ku guuleystay doorashada Guddoomiyaha Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka ee Heer Federaal isagoo wareegga labaad helay 14 cod, halka Liibaan Maxamed Xasan oo la tartamayay uu helay 10 cod.
Maxamed Xasan Cirro ayaa horay u ahaa Gudoomiyaha guddigii lagu muransanaa ee doorashooyinka.
Guddoomiyaha guddiga doorashada dadban ee maanta la doortay Maxamad Xasan Cirro oo hadal kooban jeediyay ayaa yiri.
Previous articleDHAGEYSO:Ruto oo u jawaabay Raila
Next articleKhasaaraha ka dhashay burburkii diyaaradeed ee Filibiin oo kordhay